पुरुषको भन्दा महिलाले धेरै सुत्नुपर्छ किन ? यस्तो अचम्मको छ कारण — Imandarmedia.com
पुरुषको भन्दा महिलाले धेरै सुत्नुपर्छ किन ? यस्तो अचम्मको छ कारण
काठमाडौं । शरीरलाई सधैँ इनर्जी प्रदान गर्नका लागि पूरा निद्रा जरुरी हुन्छ । विभिन्न कामको थकानपछि शरीर निद्रामा जाने गर्छ । यसले सबै अंगलाई आराम प्रदान गर्छ । शरीरलाई शक्ति सञ्चय गर्नका लागि मान्छे निदाउन जरुरी हुन्छ ।
विशेषगरी पुरुषको तुलनामा महिलाले अलि समय धेरै सुत्नुपर्छ । किनकी, महिलाहरु बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म घरायसी काममा ब्यस्त रहन्छन् । शहरको तुलनामा गाउँका महिलाहरु घरायसी काममा ब्यस्त हुने भएका कारण उनीहरुमा थकान ज्यादा हुने हुन्छ ।
तर, हाम्रो समाजमा महिलाहरुले पुरुषभन्दा पनि कम सुत्ने अवसर पाउँछन् । उनीहरु बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म घरधन्दा गर्छन् । घरको सबै चाँजोपाँजो मिलाएर मात्र उनीहरु आफ्नो ओछ्यानमा पुग्छन् । तरपनि दिनभरको थकानका कारणले उनीहरुको सुताई पर्याप्त नै हुँदैन ।
कामको चापका कारण महिलाहरुले भनेको समयमा सुत्न पाउँदैनन् । ढिलो सुत्दा उनीहरुलाई झट्ट निद्रा पर्दैन । त्यसैले, उनीहरुलाई निद्रा पूरा गर्न पनि अत्यधिक समय सुत्नुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
महिलाहरुको जीवनमा विभिन्न बदलाव आउने गर्छ । जसका कारण गर्दा उनीहरुको निद्रामा असर पुगेर इन्सोमेनिया हुने खतरा उच्च हुन्छ । त्यस्तै महिलाहरुले दिमागको प्रयोग धेरै गर्ने गर्दछन् । उनीहरुले दिमागलाई ताजा र चलायमान बनाउन पनि धेरै सुत्नु पर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
यस्तै महिनावारीको समयमा पेटको दुखाईका कारण महिलाहरु आनन्दले सुत्न नपाउने र उक्त समयमा उनीहरुको पेटमा ऐठन हुने, पेट दुख्ने, वाक्वाकी लाग्ने, मुड बदलिने, मन अत्तालिने, घरीघरी भोक लाग्ने गर्छ । जसका कारण उनीहरुलाई राती सुत्नमा कठिनाई हुने गर्छ । यसैकारण पनि महिलाहरुले पुरुषको तुलनामा ज्यादा सुत्न जरुरी छ ।
गर्भावस्थामा शारीरिक र मानसिक बदलावका कारण महिलाहरुलाई सुत्नमा समस्या हुने गर्छ । अझ सुत्केरी अवस्थामा उनीहरुलाई यो समस्या अत्यधिक हुन्छ । गर्भावस्थामा अत्यधिक मात्रामा पिसाब लाग्नु तथा खुट्टामा ऐठन हुनाले पनि उनीहरु रातमा राम्ररी सुत्न सक्दैनन् ।
सुतेको अवस्थामा मान्छे किन घुर्छ ? अक्सिजनको कमीले श्वास नलीमा अवरोध हुन गई सुत्ने बेलामा आवाज निस्कने गर्छ । त्यसलाई स्लिप एप्निया अथवा घुर्ने समस्या भन्ने गरिन्छ । घुर्ने समस्या भएका व्यक्तिका कारण घरपरिवार तथा छरछिमेकमा निकै तनाव हुने गर्छ।
घुुर्ने मानिस आफन्तबाटै टाढिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । आफ्नै परिवारका सदस्य पनि सँगै सुत्न नमान्ने, छिमेकीले समेत ‘डिस्टर्ब’ भयो भन्दै झै–झगडा गर्ने र बोलीचाली नै बन्द हुने,साथीभाइले गिज्याउने जस्ता समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । घुर्ने समस्याका कारण विशेष गरी विदेशमा रहेकाश्रीमान्–श्रीमतीबीच त सम्बन्ध बिच्छेदसमेत हुने गरेका छन्।
९० प्रतिशत मानिसमा नाकको डाडी बांगो हुन गई घुर्नेसमस्या देखिन्छ । कुनै मानिसमा अकरु नै कारणले श्वासप्रश्वासमा अवरोध भई घुर्ने समस्या आउँछ । यो समस्याले बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई दुःख दिने गर्दछ।
पहिलो विभिन्न किसिमका इन्फेक्सन,चोटपटक, तथा ट्युमरले गर्दा श्वासप्रश्वासमा अवरोध आई घुर्ने समस्या आउने गर्दछ भने अर्को माग र श्वासप्रश्वासका मांसपेशीसँगको नियन्त्रण छुट्यो भनेघुर्नेसमस्या उत्पन्न हुन्छ ।
कारण : कुनै बच्चा जन्मँदै नाक, घाँटीमा विभिन्न समस्या छ भने श्वासप्रश्वासको समस्या हुने गर्दछ । त्यसले गर्दा श्वास फेर्न गाह्रो भई घ्यारघ्यार हुने र सुतेको बेलामा घुर्नेहुन्छ ।विशेषगरी ३ देखि ७ वर्ष उमेरका बच्चामा टन्सिल एडिन्यन्सबढ्नाले घुर्नेसमस्या हुन्छ । बच्चामा हुने मिलानो भन्ने ट्युमरले गर्दा घुर्ने समस्या हुन्छ । यो नाक अथवा नाँकको पछाडि टन्सिल हुने भागमा ट्युमर आउने गर्दछ ।
युवा अवस्थामा पनि बच्चामा बढ्ने टन्सिल एडिन्यन्स ठूलो भई घुर्ने समस्या हुन्छ । एजियो फाइब्रोमाभन्ने ट्युमरले गर्दा पनि घुर्ने समस्या हुन्छ । यो विषेशगरीकेटामा बढी हुन्छ । कुनै बच्चा जन्मिँदै नाक थेप्चेर भएर जन्मन्छन् । उनीहरुको नाकको डाँडी बांगो हुने गर्दछ । त्यो कारणले गर्दा पनि घुर्ने समस्या हुन्छ । त्यसलाई भनिन्छ। यो समस्या बच्चादेखि वृद्धसम्म हुने गर्दछ ।
पोलिप्स नाकको वरिपरि भागमा आउने टिस्युहरुले पनि घुर्ने समस्या हुन्छ । वृद्ध अवस्थामा क्यान्सरजन्य ट्युमर वा अन्य ट्युमर आएर घुर्नेसमस्या हुन्छ । कसैको जिब्रो मोटो हुन्छ, त्यसलाई म्याक्रोगोलोसिस भनिन्छ । त्यो कारणले पनि घुर्नेसमस्या हुन सक्छ। बुढेसकालमा जिब्रो नरम हुने भएकाले सुतेको बेलामा जिब्रो दोब्रिने गर्दछ, त्यसले गर्दा पनि घुर्नेसमस्या हुने गर्दछ ।
एसिड अल्कालिसले गर्दा श्वास नलीको माथिल्लो भाग खुम्चने गर्छ र घुर्नेसमस्या आउँछ । श्वास नलीमा चोट लाग्दा भित्र सुनिन्छ र सुत्ने बेलामा श्वासमा अवरोध भई घुर्नेसमस्या उत्पन्न हुन्छ । जिब्रोको पछाडिको रगतको नशा फुल्दा श्वासमा अवरोध भई घुर्ने समस्या आउँछ । र्‍यालका ग्रन्थीहरु उत्पन्न हुने ठाउँमा ट्युमरआउने गर्दछन् जसलाई भनिन्छ, त्यो कारणले पनि घुर्ने समस्या हुन्छ ।
उपचार: सुरुमा आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्ने। मोटोपन घटाउने,शारीरिक कसरत गर्ने, धूमपान,मदिरा सेवननगर्ने र घोप्टो परेर सुत्ने । मेडिकलमा पोजेटिभ एयरवय प्रेसरको माध्यमबाट पनि घुर्नेसमस्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।मुखमा राख्ने माउथ एयर पिस हुन्छ, जुन
मुखमा राखेपछि श्वास फेर्न सजिलो हुन्छ र घुर्ने समस्या कम हुन्छ । के कारणले गर्दा घुर्ने समस्या आएको हो, कारण पत्ता लगाउने र सर्जरी गर्ने ।